5 Famous ekiri fim Na Europe | Save A Train Travel Europe
Home > Travel Europe > 5 Famous ekiri fim Na Europe
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 14/02/2020)
Famous ekiri fim na Europe na-aghọwo akụkụ dị mkpa nke European omenala. Famous ekiri fim na Europe na-ekwe nkwa na ị na pụrụ iche arụmọrụ. Ọ ga-ahapụ gị kpaliri, kpaliri na spellbound! Ọdịdị nke n'ịrụ nkà bụ apụ n'anya ngwa ngwa na creativity zuru spectacularly. Ndị a mgbukepụ nke mgbukepụ na-na na na anyị na-echeta. Famous ekiri fim na Europe ike a echiche nke exclusivity na ụkọ. Ọ bụ a nwa oge na nkekọrịta oge, na ị ga-achọ bask na ìhè nke ya na-egbukepụ egbukepụ.
Ndị a bụ ụfọdụ nke anyị n'elu họpụta mmadụ n'ime ndị kasị ama ekiri fim na Europe, nanị kwesịrị-na-ahụ maka omenaala n'anya:
Okporo ígwè Transport bụ The Eco-Enyi na Enyi Way To Travel. nkena-isiokwu e dere na-akụziri banyere Train Travel site Save A Train, Ndị dị ọnụ ala Train Tickets weebụsaịtị Na The World.
1. Teatro Alla Scala, Italy
O yiri naanị ezi uche na anyị ga-amalite na Italy, a na-achị mmetụta ama ekiri fim na Europe. The Teatro alla Scalla bụ ụwa na-ama n'ụlọ nke Italian Opera.
Kasị nke oké-ọbù-abù nke gara aga, n'elu ikpeazụ narị afọ abụọ, mere ebe a. Ọtụtụ ama usoro ihe nkiri nwere mbụ ha mmepụta ebe a dị ka Othello, Nabucco site Verdi na Madame Butterfly site Giacomo Puccini.
Nke a nkiri bụ ebube na mara mma. Ọ nwere a ngosi nka ebe ị pụrụ peruse onwe ebe ndị na-adịghị na-emekarị na-emeghe ka ọha na eze. The nnukwu mgbakọ na-rụrụ site osisi na-kpuchie na rụrụ red velvet. Ọ na-udo site a Bohemian crystal chandelier.
2. The Globe Ụlọ ihe nkiri, London
The Globe Ụlọ ihe nkiri a maara dị ka Shakespeare Globe. Oké Fans nke The Bard ga-eleta a ma ama nkiri na Europe. William Shakespeare ọrụ na-egosi a miri emi ghọtara ọdịdị mmadụ. Ọrụ ya captivates kiriri. Ya mastery nke English asụsụ mere ka ya ejije na poems-adịghị agafe agafe iberibe amamihe.
Ọ bụrụ na ị na-a n'anya Shakespeare, a bụ maa ebe nleta! Jehova Chamberlains Men sure ya ala 1613. The oge a nwughari na-anọchi ya ebe taa bụ obere anya si ya mbụ ọnọdụ.
Bịa ka a atọ-akụkọ, ghe oghe ọgbọ egwuregwu na-enwe ejije. Na-ata na noo. Nọdụ ala na-na na na nkuzi na haziri agụ. E nwere a mma-gara egwuregwu omume nile n'afọ ma ọ bụ na a ga na ndepụta ma ama ekiri fim na Europe.
The Paradis Latin bụ a dịkọrọ ndụ Cabaret mgbakọ ahụ bụ nọchiri nke mbụ Latin Ụlọ ihe nkiri. The Latin Ụlọ ihe nkiri a họpụtara na mbụ site onye ọzọ karịa Napoleon Bonaparte na 1800s.
Ọtụtụ owuwu edifọp ala n'oge ahụ. Nke a na-agụnye onye a. Ma ama n'ihi na ya glitz na flair, ma ọ bụrụ na ị na-achọ theatrics, ị ga-ahụ na ọ na a bonafide Paris Cabaret show. Na njikọ na pụtara ìhè Cabaret arụmọrụ, ị pụkwara ịhụ ahụkebe acrobatic na trapeze omume.
The Volkstheater na Vienna bụ a mara mma n'anya ka le. Ọ mbụ mepere 1889. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị ibu nke ya ụdị n'ụwa German na-asụ mba na na-a ga-ahụ.
Wuru dị ka a ọzọ inweta counterpart na Burgtheater, ọ họọrọ ebe mgbakọ n'oge maka elu otu ma n'ịrụ nkà bụ maka onye ọ bụla na-enwe. Ná mmalite nke a nke dị ebube nkiri, na-elekwasị anya bụ na Austrian dere. taa, ị pụrụ àmà ọtụtụ ihe olu na natara mba tokwara.
The n'isi Bar bụ na elu n'ala nke ụlọ ihe nkiri. Ọ bụ a na o ọzọ iwu ebe mgbakọ. Ọ bụ ebe a na i nwere ike na-ege ntị ihere music, enwe club ihe nakwa dị ka ịgụ ihe na dịkọrọ ndụ ngosi.
Salzburg na Vienna Ụgbọ oloko
Graz na Vienna Ụgbọ oloko
5. The National Theatre, Prague
Ọ bụ mba na anya na National Ụlọ ihe nkiri na Prague gùrù, The Golden banye n'Ụlọ Ekpere. Ọ na-anọchi nganga nile nke ya Neo-Renaissance ebube. Ị ga na-eche dị ka gị bụ akụkụ nke na ama onwe gị mgbe ị gara na nke a ma ama nkiri na Europe.
The National Theatre bụ ọgaranya akụkọ ihe mere eme ma mbụ ahụ edifọp ala na 1881. Otu mba esonyerela ọnụ na ihe nkwado nke n'ịrụ nkà. Ha so ya ịbụ wughachiri na-enwe ya kpọmkwem dị ka ọ na otu bụ.
Nuremberg na Prague Ụgbọ oloko
Munich na Prague Ụgbọ oloko
Berlin na Prague Ụgbọ oloko
Vienna na Prague Ụgbọ oloko
taa, abịa na-ahụ a ikpọ dịgasị iche iche nke ballets, ejije, na usoro ihe nkiri na-akpali ma na obi ụtọ, na N'ezie, enwetaghị a na-agba ịnyịnya na Save A Train ka e!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Famous ekiri fim Na Europe” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/famous-theatres-europe/ የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / fr na / ma ọ bụ na / es na ndị ọzọ asụsụ.
#nkiri ParadisLatin performingarts TeatroAllaScala nkiri TheGlobeTheatre Train Travel Volkstheater
Complete Mbido Guide To Italy Site Train
5 Best National Ememe Na Europe na-enweta
Train Travel Britain, Train Travel France, Inzọ Njem Italytali, Zọ njem Sweden, Train Travel Switzerland, Train Travel UK, Travel Europe